အဆိုပါ sweltering နွေရာသီအဖြစ်ကလေးတွေနှင့်လူကြီးများဖွယ်ရှိအံ့ဆဲဆဲအားလပ်ရက်များ၏မျှော်လင့်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိချဉ်းကပ်။ ကျောင်းများနှင့်ကောလိပ်များအတွက်နွေရာသီအဘို့ကိုပိတျထားခံရအတူအဘယျအသင့်ရဲ့တံခါးပိတ်သူတွေနဲ့အတူနေတဲ့အားလပ်ရက်အပေါ်သွားထက်ပိုကောင်းပါတယ်။ အလွန်ခဲတစျခုနွေရာသီများတွင်ပူပြင်းတဲ့ဦးတည်ရာကိုသွားကြိုက်နှစ်သက်သည်။ က Goa ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လျှင်! တိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးဟေးလ်ဘူတာဒီမီးခိုးအပူထဲမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးသောနေရာများဖြစ်ကြသည်။
နွေရာသီအတွက်ခေါင်းဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဟာတောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြတိတ်ဆိတ်တဲ့, နွေရာသီအပူထိုပြည်၌သင်တို့သည်မထိပါဘူးသင်တို့ရှိသမျှသူမ၏ဘုန်းအသရေအတွက်လှပသောမိခင်သဘာဝကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ တိုတောင်းတဲ့နဲ့စိတ်အေးလက်အေးခရီးစဉ်များအတွက်, သငျသညျအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Maharashtra ပြည်နယ် Lonavala နှင့် Khandala တစ်ဦးအလည်အပတ်စီစဉ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဣနြေ္ဒနှင့်ဆိတ်ငြိမ်, သင်ကျိန်းသေသင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့အပန်းဖြေရလိမ့်မည်! တစ်မိသားစုနှင့်အတူခရီးစဉ်သို့မဟုတ်သင့်ကိုခစျြတစျခုအဘို့, မြောက်ဘက်ကိုတက်ဦးတည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ယင်းကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်လှပသောချိုင့်, စျေးဝယ်, ရင်ခုန်စရာလူတန်းစားပေါင်းစုံနှင့်လမ်းကြောင်း Exploring သင်ဒီမှာအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ဖြစ်ကြသည်။ leh Ladakh မှ tripping လမ်းထက်အဘယ်အရာကိုပိုမိုကောင်းမွန်သင့်သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တော်နှင့်အတူတစ်ဦးထက်ပိုစွန့်စားခရီးစဉ်သည်။ လူအပေါင်းတို့သည်လမ်းရှာဖွေထုတ်လုပ်စီး, လမ်းဘက် dhabas အပေါ်အစာစားခြင်း, သင့်ဆိုင်ကယ်ပေါ်ခရီးသွားလာ။ တအားလပ်ရက်အပေါ်ပိုမိုအဘယ်အရာကိုတောင်းနိုင်သည်!
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော leh Ladakh Tour Package ကို, Lonavala မှခရီးစဉ်, ကက်ရှမီးယား Tours မှအထုပ်များ၏အကောင်းဆုံး, ထိုကဲ့သို့သော Srinagar Tour Package ကိုကိုတို့ကထောက်ပံ့ပေးအနည်းငယ် packages များဖြစ်ကြသည် - သင့် vacationing ဆုံးဖြတ်ချက်များအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဖြစ်သော Khandala ။ သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးထုတ်ကောက်သေချာပါစေ! ခရီးသွားလာမင်္ဂလာ!
Hidden Himachal မှခရီး
leh-Ladakh နှင့် Srinagar
သဘာဝတရား Tour Package ကို၏အလှအပ
Uttarakhand Tour Package ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ
Chandigarh Himanchal Tour Package ကို